၂ဝ၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၂၅)ရက်နေ့တွင်နေကြတ်မည်
၂ဝ၁၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ(၂၅)ရက်နေ့တွင်အနောက်လောင်ဂျီတွဒ် ၈၂ ဒီကရီ
၁၄ မိနစ်၊တောင်လတ္တီတွဒ် ၆၈ ဒီကရီ ၄၁ မိနစ်၊နေတစိတ်တပိုင်းကြပ်မည်ဖြစ်ရာ၊
မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေလည် ၁၂း၄၉ မိနစ် အချိန်တွင်မြင်ရမည်ဖြစ်သည်။ နက္ခတ်ပညာ
ရပ်တွင် တနှစ်တွင်နေသည် အနဲးဆုံး (၂)ကြိမ်၊ လသည်(၂)ကြိမ်ကြတ်လေ့ရှိသည်
နက္ခတ်ဗေဒင်ဝါသနာရှင်များအတွက် မိမိ၏ အလုပ်အကိုင်
အအစည် အောင်မြင် စေရန် အောင်အိုး အစီအရင်ပြုလုပ်၍အဓိဌါန်
ဘုရားရာကို-------- သစ်သီး၊ပန်း၊နံသာတိုင်၊မွေးတိုင်၊မုန်(၉)မျိုး စီဖြင့်ကပ်လှူပူဇော်ပါ။
ဘုရားဂုဏ်တော်(၉)ပါ ကိုရွတ်ဆို၍ မိမိလိုသောဆုကိုတောင်းပါ။
onfum;rawmfwqrIwckaMumif toufqHk;&IH;cJh&onf/tb,faMumifhxdkodkUOyapö'uuH ESifhtouf
qHk;&IH;cJh&ygoenf/rif;orD;\_Zmwmudk ta&SUwdkif;eu©wfaA'ifenf;pepf t& rlvZmwmudkqef;ppfaomf-
pmzwfol\_Zmwm*Gif wGif v*f [laom tu©&mudk awGU&rnf/ v*fonf
vl wpfa,muf pwifarG;zGm;onhftcsdefudk rSwfom;xm;onhf oauFwyifjzpfygonf/
Zmwm&SifarG;zGm;csdefü ta&SUrdkukwfpuf0dkif;&dS &moDpuf0ef;ESifh urÇmajrwdkYxdawGU&m
rdrdZmwm(odkU)rdrdrdwfaqG\_Zmwm wGif ,ckvydkif;twGif; aiG0if?r0if uHaumif;raumif; odvdkygu ZmwmtwGif;&Sd v*f\_&moD?
]]eu©wf (27) vHk;}}
vlYb0\_tjzpftysufrsm;?umvtydkif;tjcm;udk ydkif;jcm;&mwGif eu©wfocifj*dK[f rsm;ESifheu©wf
ydkifumv rsm;udk oHk;pGJMuonf/ 'om?bkwåd rsm;ydkif;jcm;í a[majym&mwGif toHk;jyKonf/
tm&yfwurÇmvHk; wkefvIyfacsmufcsm; cJh&aomtmPm&Sifq'´ef[lpdef\_Zmwm twGif;
ဂြိုဟ်တို့၏ မိတ်ရန် ဥဒသိန်များ
txufaz:jyyg yHkudk&moDpuf[kac:qdkjyD;? rdó&moD 0H rSpwifjyD; 360H wGifqHk;onf/
tmó0PDeu©wfeSifhpef;,SOfíarG;zGm;vmolonf tvStyrGrf;rHjyifqifjcif; udkESpfouf
]]earmwó b*0awm t&[awm or®m orÁK '¨ ó}}H
Mean Places of STARS
Rangon : Longitude 96°12' .Latitude 16° 47'.Date&Time: 1/1/2005 00:00:00 AM
1/ we*FaEGaeh a&T? aMu;eD? avmifpmypönf;? om;a&?odk;arT;? cRefxufaomypönf;rsm;ESiftvkyf
၁။ တနင်္ဂနွေနေ့ ရွှေ၊ ကြေးနီ၊ လောင်စာပစ်္စည်း၊ သားရေ၊သိုးမွှေး၊ ချွန်ထက်သောပစ်္စည်းများနှင်အလုပ်
Labels: နေ့ အလိုက်ပြုလုပ်နှိင်သောကိစ်္စများ